Ku Raac Lacag La’aan - Seattle Traffic
Ku Raac Lacag La’aan
Ku safarka baaskiil ama mooto waa fursad aad u weyn oo looga gudbi karo Buundada Hoose ama lagu gaari karo meylkaaga hore/ugu dambeeya eed ku gaareyso baska. Lime iyo Link wuxuu siinayaa raacid lacag la’aan ah shaqaalaha asaasiga ah iyo dadka u socdaalaya ballamada tallaalka COVID-19. Wax badan ka ogow wadaagga ku saabsan baaskiil iyo mooto.
Raacis 30 daqiiqo lacag la’aan ay helayaan shaqaalaha caafimaadka guud iyo saraakiisha xoojinta sharciga. Sidoo kale, raacis lacag la’aan ballamada lagu aadayo tallaalada, isla app-ka, geli koodka xayeysiinta: SEARIDETORECOVERY
3Raacis lacag la’aan mootada ee daryeelka-caafimaad, waxbarashada, gaadiidka dadweynaha, ilaaliyaasha, iyo shaqaalaha adeegga cuntada; Isdiiwaan-gelin imika. Sidoo kale, raacitaano lacag la’aan oo lagu tagayo ballamada tallaalka; Hadda isku qor.